Jubbaland oo sheegtay in ay is difaacayso hadii la soo weeraro – Radio Daljir
Febraayo 12, 2020 7:58 b 0
Maamulka Jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay Ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Daraawiishta Jubbaland geeyay duleedka Degmada Beled-xaawo ee Gobolka Gedo, iyadoo kuwo kale ay halkaas joogeen.
Ciidamada ayaa waxaa hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo Cabaas Ibraahim Gurey oo kamid ah Saraakiisha Sar sare ee Jubbaland, waxaana la sheegay in Ciidanka la geeyay duleedka Beled-xaawo ay wataan gaadiidka nooca dagaalka.
Dad ku sugan duleedka Beled-xaawo ayaa soo sheegaya inay arkayeen Ciidamo badan oo wata gaadiid dagaal, isla markaana soo gaaraya deegaanka, iyagoona sidoo kalena sameeystay fariisimo Cusub.
Cabaas Ibraahim Gurey oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheega in Ciidamada Jubbaland ee gaaray duleedka Degmada Beled-xaawo ee Gobolka Gedo ay yihiin kuwo aad u diyaarsan.
Isaga oo sii hadlaayay Cabaas Ibraahim Gurey ayaa waxaa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in Maanta ay aag isugu jiraan Ciidankii dowladda iyo Jubbaland, kuwaasi oo uu sheegay in doonayay inay dagaal la galaan Al-shabaab.
Si kastaba Degmada Beled-xaawo ayaa waxaa ku wada sugan Ciidano ka tirsan dowladda Federaalka iyo kuwa Daraawiishta Jubbaland, iyagoona dhawaan halkaas dagaal Khasaaro geystay uu ku dhexmaray labada dhinac.
Aqalka sare oo maanta ka doodaya sharciga labaad Aqrinta hindise sharciyeedka jaangoynta